China yenza eyakho ileyibhile yabucala imivumbo Lasel Ihowuliseyili eyelashes Mink mveliso kunye nabenzi | Weiti
Yenza Eyakho Label Label Yakho Eyodwa Ihowuliseyili Eyelashes Mink
1, isitayela se-EDITH 3d ye-mink emfutshane yeenkophe zobuxoki kunye nebhendi ethambileyo
2, 100% yenkohlakalo eyenziwe simahla
I-3, i-eyelashes eyimfihlo yabucala enebhokisi yokupakisha ye-eyelash
4, Factory ixabiso ngqo kwihowuliseyili
√ I-100% yoboya be-mink yokwenene
√ Ithambile kwaye ikhululekile
Label Yenza ngokwezifiso iilebheli zabucala
I-2 eyelashes yobuxoki yenza amehlo akho aqaqambe kwaye abe nomtsalane, atshintshe amehlo akho, iinkophe ezinkulu nezityebileyo, edala imvakalelo engenasiphoso yokuqina. Ngokwenene gxininisa iliso. Kulula ukuyisebenzisa kwaye uyisuse, ithambe kakhulu kwaye intofontofo ngaphandle komonakalo emehlweni.
Ukunikezela okumangalisayo kwe3D
1.Ukufumana iziphumo ze-3D kukunika eyona mbonakalo inomdla onokuyicinga. Ilula kwaye kulula ukuyisebenzisa, i-eyelashes engeyonyani iya kudityaniswa ngaphandle komthungo kunye neeyelashes zakho, ukubonelela ngokulula xa unxibe i-eyelashes kwaye ungonwabi xa unxibe ixesha elide.
4.4 Isibini see-eyelashes zethu zobuxoki ze-3D yi-100% eyenziwe ngezandla ngabasebenzi bethu. UkuQinisekiswa koMgangatho, yenza ngokwezifiso ii-eyelashes zakho ngokusika iziphelo ukuze ulingane ubude obufunayo.
I-3.3. Eyelashes eyenziwe ngesandla, eyona nto inomdla kunye ne-chic. Uyilo lwenzululwazi lwenza kube lula ukunamathela emehlweni.
Ukuveliswa okunemigangatho emininzi, kwendalo kunye nokunxiba okufana nobomi, yenza amehlo akho akhanye kwaye athande.
Yenziwe kwi-100% ye-mink yeenwele ekhohlakeleyo yasimahla, ithambile kwaye ikhululekile ukunxiba.
Ngenxa yamehlo abantu abo kunye nokuthandwa, kuyilwe ubude obuhlukeneyo ukuze bahambelane neemfuno zakho.
√ 100% iinwele ze-mink yokwenyani
Otton Umqhaphu kunye nebhanti ethambileyo
Ixesha elide ukuya kumaxesha angama-25-30
× ifayibha ezimbi zokwenziwa
× Ibhanti elukhuni kunye nefayibha emdaka
× Ifayibha kulula ukuyaphula
LOGO YABASEKHAYA BASEKHAYA
Elungiselelweyo logo yabucala iyafumaneka. Iqela lethu loyilo linokuxhasa uyilo lwe logo yakho, uyilo lokupakisha kwe-eyelash kunye nengcebiso yoyilo.
Ukuqinisekisa imivimbo ekumgangatho ophezulu, ukusuka kwimathiriyeli ukuya kwiimveliso ezenzelwe i-eyelashes, iqela lethu lokuhlola lahlulwe laba ngamaqela ama-3 ukulawula ngokungqongqo imathiriyeli, imivumbo egqityiweyo, imigangatho yemivumbo egqityiweyo. Zonke inyathelo ziya kubhalwa phantsi kwiphepha lolawulo lomgangatho.
Imveliso yeLashes egqityiweyo
Ukupakisha / isithuba>
Indlela yokufaka iinkophe zobuxoki
Ukuchonga i-eyelashes yobuxoki elungileyo kwimilo yamehlo akho.
Kuxhomekeke kubume bamehlo akho, qinisekisa ukuba ukhetha imivumbo yesayizi echanekileyo. Umzekelo, ukuba imo yamehlo yakho ifihliwe, isibini esinee-eyelashes zobuxoki sinokukulungela ngcono. Ukuba unesimo esimehlo esingqukuva, yiya kwimivimbo emifutshane ebonelela ngevolumu eninzi.
Qinisekisa indawo yokusebenzela ecocekileyo neyakhanyayo
Jonga, bendinemicimbi eliqela xa ndizifumana ndileqa isicelo sam se-eyelash engeyonyani kwigumbi elingakhanyisiyo kunye nabahlobo bam abalinde ngomsindo ukuba ndisiqingatha seyure kwakhona. Kulula ukulibala ukuba siphatha iziqwenga zemathiriyeli, sisebenzisa ukukhanya okukhanyayo kombala kuya kunceda ekuqinisekiseni ukuba uphatha imivumbo ngokuchanekileyo kwaye uya kuqinisekisa ukuba isicelo sakho seglu eyelashe asizukujika.
Sebenzisa ii-tweezers ukucoca ngononophelo imivimbo kwitreyi.
Kubalulekile apha ukuba uthabathe imivimbo kwikona yebhanti ye-lash kwaye uphephe ukuyikhetha kwi-eyelash uqobo. Kungenxa yokuba iya konakalisa i-eyelash ngaphambi kokuba ube nethuba lokuyibeka.
Fumana ubude ngokuchanekileyo!
Ukuqinisekisa ukulungeleka okugqibeleleyo, bamba isinqe nxamnye nelihlo lakho ngekona yangaphakathi (ecekeceke) yokuqhushumba ngaphezulu kwendawo apho imivimbo yakho ibanda khona. Ukuba ukuqhuma kukude kunenkophe yakho, nqunqa ukugqithisa kumda wangaphandle.
Nje ukuba imivumbo yakho engeyonyani ikulungele ngokupheleleyo ukusetyenziswa kwijwabu leso, yongeza umaleko wezambiso kunye nengubo yemascara, njengoko uhlala uqhele. Zive ukhululekile ukugoba i-eyelashes yakho yendalo nokuba uziva ngathi 'yongeziwe'.
Faka isicelo seglu eyelashe
Ukubamba i-lash nge-tweezers, sebenzisa umaleko omncinci wokuncamathela kwebhanti ecaleni kwebhanti ye-lash. Oku kubonakala ngathi kulula kodwa khumbula ukuba njengazo zonke izinto zokubambelela, kuncinci okungaphezulu.
Usebenzisa isixhobo okanye ibrashi encinci, sebenzisa umaleko omncinci weglue ecaleni kwebhanti ye-lash ukusuka esiphelweni ukuya esiphelweni. Ukuncamathela kuya komelela ngokwaneleyo ukuqinisekisa i-eyelash yobuxoki ehlala ihleli. Emva koko linda nje imizuzwana embalwa de kube ubambelela.
Inye into ephambili apha, musa ukufaka isincamathelisi ngqo kwinkophe. Ukuncamathela kuya koma kwaye ukusebenza kwayo kuya kuncipha ngokukhawuleza. Unokubeka emngciphekweni wokonakalisa ijwabu leso kunye neliso lakho.
Faka isicelo seenkophe zobuxoki
Usebenzisa ii-tweezers zakho, cofa umatshini wokukroba ngononophelo embindini nakwiphambili. Ngononophelo beka ibhanti ye-lash ngokuthe ngqo kulusu ngaphezulu kwemivumbo yakho yendalo. Ngenisa ngobunono i-eyelash yobuxoki ukusuka esiphelweni ukuze usondele kwi-eyelashes yakho yendalo ngangokunokwenzeka.
Nje ukuba wonwabe kukubekwa endaweni yokuqhuma, emva koko sebenzisa uxinzelelo olunobunono kuyo yonke ibhendi ye-lash imizuzwana embalwa de ibe iseti. Okokugqibela, bamba iikona zelash kweminye imizuzwana embalwa ukukhusela ukulunga.
Hlanganisa uze udibanise kwakhona!
Sebenzisa i-mascara, chukumisa kancinci i-eyelash engeyiyo ukuqinisekisa ukuba iyadibana nemivumbo yakho yokwenyani. Unokusebenzisa i-eyeliner ngaphaya kwebhendi ye-lash eyinyani ukuyinika inkangeleko yendalo kunye nokunyaniseka. Ngokwendalo, oku kuyasebenza njengoko ubona kufanelekile kwaye akukho kuxubana kungafunwa.
Usebenzisa iminwe yakho, tyhala ngononophelo ngokuchasene nemivimbo yokukhuthaza ijika. Oku kuyakunceda ukubanika ukubonwa kwevolumu ethe kratya kwaye uyijike phambi kobusuku obukhulu obuzayo.
I-eyelashes yethu engeyonyani iphumelele isatifikethi seRoHS, unokuqiniseka ngemigangatho yethu kunye nokhuseleko kwimveliso.
Ngolunye uphando, wamkelekile Qhagamshelana nathi ngeenkcukacha ezithe kratya nangaliphi na ixesha. Iqela lethu lokuthengisa liya kuyiphendula yonke imibuzo yakho zingaphelanga iiyure ezingama-24.
Egqithileyo Ihowuliseyili yeeBhokisi zeeleyibheli eziCwangcisiweyo zabucala i-3D Lashes 100% ye-Real Mink Eyelashes Abathengisi
Okulandelayo: Isitayile se-ALLISON Ilebheli yabucala ethengisa i-25mm Mink Eyelashes
I-Eyelashes yomenzi yoMvelisi weVenkile yabucala ...
Ubuninzi bulula ukufaka umtya opheleleyo we-3d 5d 100% Mink L ...
I-Label yabucala ye-Eyelash Box Bulk Lon ...
Izandiso zeEyelash, Imivimbo ye-mink, Abathengisi bee-Eyelash, Imivimbo yamehlo, eyeliner, I-liner yamehlo,